नार्कोनन सफलताको भिडियो - ‍डेनेरिया बी.
मैले मेरो श्रीमानसँग विवाह गरेको पहिलो हफ्तामै उहाँ लागूपदार्थ सेवन गर्नुहुन्छ भनेर थाहा पाए। र यो मेरो लागि धेरै विनाशकारी थियो।
सायद यो कुराको बारेमा मैले कहिल्ये जान्न चाहेन। तपाईलाई थाहा छ, तपाईंले आँखामा पट्टी लगाउनु भएकोछ किनभने तपाईंलाई यो विश्वाश लाग्छ कि जो मान्छेसँग जीवन बिताउने निर्णय गर्नुभएको छ उसले तपाईंलाई कहिले बिश्वासघात गर्दैन।
अनी मैले उनलाई म धेरै क्रोधित थिए र मलाईं केही थाहा छैन भनेर भनिदिए। म साँच्चिकै आघातमा थिए,जस्तै "यो कसरी हुन गयो?" अनि उहाँले मलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो, उहाँले घुँडा टेकेर भन्नुभयो, "के तिमीले मलाई छोड्न लाको हो?" मलाई उहाँसँग कुरा गर्न मन लागेन। उहाँले म आँफै नार्कोनन जान चाहन्छु भनेर भन्नु भएको थियो।
यदी उहाँ आँफैले परिवर्तन हुन इच्छुक नभएको भए सायद म यसो गर्न सक्दिन होला।
यो कार्यक्रम पछि उहाँको पहिले र अहिलेको अवस्थामा रात दिनको फरक देखिन्छ।
उहाँले अहिले मेरो ध्यान राख्नुहुन्छ र उहाँ सबै मनमा लागेका कुराहरू स्पष्ट पार्नुहुन्छ, उहाँ यति इमान्दार पहिले कहिल्यै पनि थिएनन्
यो मेरा लागि निकै नयाँ जस्तै थियो। तपाईंलाई थाहा छ, त्यसपछि मलाईं लाग्यो, "मैले बिहे गर्न चाहेको मान्छे यही हो।"
म सबैको लागि नार्कोननसँग अत्यन्तै कृतज्ञ छु किनभने - त्यो समर्थन र कार्यक्रमले नै, मेरो श्रीमानले आफ्नो जिम्मेवारीको बारेमा बुझ्नुभएको छ।
हाम्रो हामीसँग २-१ / २ वर्षको र एक १ वर्षको छोरीहरू छन्। अब मेरो ‍ नर्सिङ स्कुलमा हुनुहुन्छ।
पहिले कुराहरू कस्तो थियो र अहिले अचम्मले परिवर्तन भएको देख्दा त्यो कुरा म शब्दले बयान गर्न सक्दैन।